DF "Waan qabsaneynaa Buurhakaba" - Caasimada Online
Home Warar DF “Waan qabsaneynaa Buurhakaba”
DF “Waan qabsaneynaa Buurhakaba”
Maamulka Dowlada Soomaaliya ugu Magacaaban degmada Buurhakabo ee gobolka Baay ayaa ka hadlay Dagaalka Ciidamada Huwanta ay ku rabaan qabsashada degmadaas.
Guddoomiyaha Dowladda ee Magaalada Buurhakabo Cali Cabdi Cali Garuun oo la hadlay Warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kaabiga ku hayaan Degmadaasi.
Cali Cabdi Cali ayaa sheegay in Degmada Buurhakabo ee Gobalka Baay ciidanka ay ujiraan 8-Km sida uu sheegayna saacadaha soo socda ay rajeynayaan inay gudaha ugalaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
dhanka kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in hadii ay gudaha ugalaan Magaalada Buurhakabo ee Gobalka Baay ay ku dadaalayaan xaqiijinta ammaanka Magaaladaasi.
Wuxuu tilmaamay in marka ay gudaha u galaan Magaalada tallaabada ugu horeysa ee ay qaadayaan ay tahay xaqiijinta ammaanka Magaaladaasi si nabadgalyada aysan gacanta dowladda ugu bixin.
Ciidamada Huwanta ah ayaa Wali waxaa ay ku suganyihiin deegaano duleedka ka ah Degmada Buurhakabo saacad walbana dagaal ayaa la filan karaa.